Vashandi Voita Musangano neHurumende Vachiti Havachadi Kutambiriswa neMadhora eZimbabwe
Chikumi 21, 2020
Muzvinafundo Mthuli Ncube
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council Amai Cecilia Alexander vanoti vari kutarisira kuita musangano nehurumende svondo rino wekuzeya nyaya dzemari dzavanotambiriswa idzo vanoti hadzichakwane.
Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa pasi pegungano re National Joint Negotiating Council.
Gurukota rezvevashandi Muzvinafundo Paul Mavima vakaudza Studio 7 kuti vange vachitarisira nhaurirano idzi mwedzii uno.
Mashoko aVaPaul Mavima
Hurumende svondo rapera yakambowedzera vashandi mari yekuti vambofanobatsirikana asi masangano ose evashandi vehurumende ari kuramba mari iyi achiti haikwane.
Bazi rezvehupfumi rakapa vashandi mari yakapetwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana uye madhora makumi manomwe nemashanu yemari yeAmerica iri kunzi covid allowance. Mari idzi ndedzemwedzi mitatu nhaurirano dzichiitwa.
Asi Amai Alexander vanoti vashandi vave kuda kutambiriswa nemari yekunze sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Vanoti vemuzvitoro vakawanda vari kubhadharisa mari dzinoenderana nedhora rekuAmerica zvosiya vashandi vachinetseka zvakanyanya.
VaRamaphosa Voshora Kurwiswa Kwoitwazve Vatyairi veMarori Vekune Dzimwe Nyika muSout Africa
Zimbabwe Yocherechedza Mazuva eKudzivirira Mhirizhonga Mudzimba Akatarwa neUnited Nations
Vana Makumi Mashanu neVasere (58) Vobatwa neChirwere cheCovid-19 paChinhoyi High